အမျိုးသမီး ကျန်းမာရေး ပြဿနာအဖြေရှာ
ဒေါက်တာမိုးအောင်ကျော်နိုင် (အထွေထွေရောဂါအထူးကုဆရာဝန်ကြီး)မှ ဖြေကြားပေးပါသည်။ ရင်သားက အဆီကျိတ် ခွဲသင့်၊ မသင့် မေး. မနှစ်က ရင်သားမှာအကျိတ်လေးရှိလို့ ရန်ကုန်မှာသွားပြတယ်။ ရင်သားကိုအကုန်စစ်ခဲ့တယ်။ အဆီကျိတ် ပဲတဲ့။ အဲဒါနဲ့ မခွဲခဲ့ရဘူး၊ ရုံးဝန်ထမ်းဆိုတော့ ခွင့်လည်းသိပ်မရလို့ အဲဒါကြာလာရင် စိတ်ပူရလားဆိုတာ သိချင်လို့ပါ။ ခွဲသင့်၊...
နေခြည်နုနုလှုံတာကြောင့် ဗီတာမင်ဒီကို ရရှိစေနိုင်ပါတယ်။ နွားနို့နဲ့ကွေကာ မှီဝဲရင်လည်း ဗီတာမင်ဒီ ရရှိမှုများပါတယ်။ ဗီတာမင်ဒီ အလုံအလောက်ရရှိတဲ့အတွက် ရလာနိုင်တဲ့ ကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးတွေကတော့- – စိတ်ဓာတ်တက်ကြွစေပါတယ် အသက်ကြီးချိန်မှာ ဗီတာမင်ဒီပမာဏ လျော့နည်းသူတွေက ဗီတာမင်ဒီပုံမှန်ရှိသူတွေထက် စိတ်ဓာတ်ကျနိုင်ခြေ ၁၁ဆ ပိုများပါတယ်။ – နှလုံးကို...
လေ့ကျင့်ခန်းမလုပ်ဘဲ ဗိုက်ချပ်ရပ်စေချင်တယ်ဆိုရင် . . .
(၁) မတ်မတ်ရပ်ပါ၊ မတ်မတ်ထိုင်ပါ။ (၂) ၀မ်းဗိုက်ချပ်ရပ်စေမယ့် ၀တ်စုံကို ၀တ်ဆင်ပေးပါ။ (၃) စိတ်ဖိစီးမှုကို တတ်နိုင်သမျှ လျှော့ချပေးပါ။ (၄) အချိုရည်အစား ရေပဲသောက်ပါ။ (၅) ကောက်နှံတစ်ခုလုံးအစာနဲ့ ပရိုတင်းများတဲ့ အစာတွေကို များများ ကြိတ်ဝါးပေးပါ။ (၆) သရေစာအဖြစ်...
သင်၏ ပျိုမြစ်နုနယ်မှုအလှတရားကို ဖျက်ဆီးနေသည့် မိတ်ကပ်လိမ်းခြယ်မှု ငါးမျိုး
လရိပ်မေ ပျိုမြစ်နုနယ်တဲ့ အလှတရားပိုင်ဆိုင်ချင်တယ်ဆိုရင် ရှိရင်းစွဲ အရွယ်ထက် ပိုရင့်ရော်စေတဲ့ မိတ်ကပ်ပြင်ဆင်မှုတွေကို ရှောင်ဖို့လိုပါတယ်။ သင့်မျက်နှာမှာ အရေးကြောင်းပါးပါးတွေ၊ အရေးကြောင်းနက်နက်တွေ ရှိနေတယ်ဆိုရင်တောင် မိတ်ကပ်ဆိုတာ အဲဒီအပြစ်အနာအဆာတွေကို ဖုံးအုပ်ပေးနိုင်ပြီး မျက်နှာပျိုမြစ်နုနယ်အောင် ဖန်တီးပေးတဲ့ အရာမျိုး ဖြစ်သင့်တာပါ။ ဒါကြောင့် မိတ်ကပ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး...
တေလာဆွစ်ဖ် လှပကြည့်ကောင်းရခြင်း အကြောင်းရင်း ၁၀
၊ လရိပ်မေ ၊ (Ref;HD) ကမ္ဘာ့အကျော်ကြားဆုံး လူငယ်အနုပညာရှင်တစ်ဦးဖြစ်လာတဲ့ တေလာဆွစ်ဖ်ရဲ့ လှပကြည့်ကောင်းနေရတဲ့ အကြောင်းရင်းတွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ (၁) ဆံပင်ပုံစံ “ကျွန်မဆံပင်က ပင်ကိုလှိုင်းတွန့်ရှိတဲ့ အကောက်ပါ။ အဲဒီဆံပင်ကို ဒီအတိုင်းထားလိုက်တာ များပါတယ်”လို့ တစ်ချိန်က တေလာက ပြောခဲ့ပေမယ့် အခုအခါ...
ပိန်တဲ့သူတွေ ကျန်းမာရေးနဲ့အညီ ကိုယ်အလေးချိန် မြင့်တက်လာအောင်
ဒေါက်တာဒေါ်ဝင်းဝင်းမြင့် (အာဟာရဆိုင်ရာ အထူးကု ဆရာဝန်ကြီး) မေး။ ။ ပိန်တဲ့သူတွေက ဘယ်လိုကျန်းမာရေး ထိခိုက်မှုတွေ ဖြစ်တတ်ပါသလဲ ဆရာမ။ ဖြေ။ ။ ပိန်တဲ့သူအများစုက ဘယ်လို အစားအသောက်ကိုမှ မက်မက်မောမော မစားတတ်တဲ့သူတွေ များပါတယ်။ ထမင်းဆိုလည်း အများကြီး မစားနိုင်ဘူး။...
တစ်နေ့ပန်းသီးတစ်လုံးစားခြင်းဖြင့် ခံတွင်းအနံ့ဆိုး ကင်းစင်စေနိုင်
ပန်းသီးမှာ ပက်တင်အင်ဇိုင်းပါဝင်တဲ့အတွက် ပန်းသီးစားလိုက်တဲ့အခါ ၂၄ နာရီအတွင်း ခံတွင်းအနံ့ဆိုးမထွက်အောင် ကာကွယ်ဟန့်တားပေးနိုင်ပါတယ်။
ခန္ဓာကိုယ်အတွက် ငှက်ပျောသီး၏ ကောင်းကျိုး
– မျက်စိ ညဘက် အမြင်အာရုံကို ကောင်းမွန်စေပါတယ်။ – နှလုံးသွေးကြော သွေးတိုးရောဂါမဖြစ်အောင် ကာကွယ်ပေးပါတယ်။ – အစာအိမ် အစာအိမ် အနာမဖြစ် အောင်ကာကွယ်ပေးပါတယ်။ – အရိုး အရိုးအက်တာမဖြစ် အောင်ကာကွယ်ပေးပါတယ်။ – အူလမ်းကြောင်း ၀မ်းပျက်ဝမ်းလျှောနေသူတွေမှာ ကုန်ဆုံးသွားတဲ့...
ကလေးများအကြောင်း သင်မသိသေးသည့် စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာ အချက်များ
၊ စူး ၊ (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ကလေးတွေ ချစ်စရာကောင်းသလားလို့မေးရင် သိပ်ကိုချစ်စရာကောင်းတယ်လို့ပဲ ဖြေကြမှာပါ။ သိပ်ချစ်စရာကောင်းတဲ့ ကလေးလေးတွေ ပိုင်ဆိုင်ကြတဲ့ မိဘတိုင်းနဲ့ ချစ်စဖွယ် သားသားမီးမီးလေးယူဖို့ ပြင်ဆင်နေကြတဲ့ မိဘတိုင်းသိထားသင့်တဲ့ ကလေးတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာ အချက်တွေကို ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။ အချက် (၁)...
မိသားစုတစ်ခုမှာ ကျန်းမာရေးက အရေးကြီးဆုံးပါဆိုတဲ့ အဆိုတော် ဟဲလေးမိသားစု
– ကိုဟဲလေးရဲ့ လတ်တလော အနုပညာလှုပ်ရှားမှု အခုလက်ရှိကတော့ သင်္ကြန်ခွေထွက်ဖို့ရှိတယ်။ ပြီးတော့ နယ်ဘက်တွေမှာ သီချင်းတွေသီဆိုဖြစ်နေပါတယ်။ – အစ်ကိုတို့ မိသားစုမှာ တစ်ယောက်ကျန်းမာရေးတစ်ယောက် ဘယ်လိုတွေ ဂရုစိုက်အကြံပေးဖြစ်ကြပါသလဲ။ ခရီးအမြဲတမ်းသွားရတော့ နေရာစုံ၊ ဒေသစုံ ရောက်တယ်။ အစားအသောက်၊ အနေအထိုင်၊ ရာသီဥတုကအစ...
Page 328 of 440« First‹ Previous324325326327328329330331332Next ›Last »